प्रचण्डको प्रस्ताव झुट र षडयन्त्रको पुलिन्दा : ओली, घमण्ड र दम्भको पराकाष्ठा भयो : प्रचण्ड
वीरेन्द्र ओली शनिबार, मंसिर १३, २०७७, २१:११
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पेश गरेको प्रस्ताव झुट र षडयन्त्रको पुलिन्दा भएको आरोप लगाएका छन्। शनिबारको सचिवालय बैठकको प्रारम्भमै प्रचण्डले आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध गरेपछि ओलीले एक घण्टाभन्दा बढी बोलेका थिए।
पार्टीं बैठकमा आक्रोशित हुँदै ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन पार्टी विभाजन गर्न ल्याइएको झुटको पुलिन्दा भएको भन्दै तिखो आलोचना गरे। ‘पार्टी र सरकारले गरेका राम्रा कामै नदेख्ने एकोहोरो र प्रतिपक्षी दलभन्दा पर गएर आरोप लगाउने? यो किन गरिस्, त्यो किन गरिस् भन्ने, सत्य तथ्यको कुरै छैन, बजारिया हल्ला बटुलेर आरोप लगाउने?’, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रचण्डजीको प्रस्तावमा कुनै आधार छैन। कुनै सत्यता छैन। त्यो प्रस्ताव समग्र झुटको पुलिन्दा, षडयन्त्रको पुलिन्दा, फुटको पुलिन्दा, गुटबन्दीको पुलिन्दा मात्रै हो।’
पार्टीमा गुटबन्दीको कुरा गर्ने प्रचण्डले आफैं खुमलटारमा गुटको भेला गर्दै हिँडेको भन्दै ओलीले त्यो पार्टी बैठक हो कि गुटको भेला हो भन्दै आक्रोश मिश्रित प्रश्न राखेका थिए। ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा बाँडेको विषयमा समेत आपत्ति जनाएका थिए। उनले त्यो विधि पद्धति अनुसार हो? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय ओलीले प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको खण्डन गर्नमै खर्च गरेको ती सचिवालय सदस्यको भनाइ छ।
यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमा दम्भ र घमण्डको पराकाष्ठा भएको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए। ‘तपाईं(केपी ओली)ले आफ्नो कमीकमजोरी स्वीकार गर्दै गर्नुहुन्न। सरकार सबै ठीकठाक चले जस्तो गर्नुहुन्छ’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘यो त अति भयो। तपाईंमा दम्भ र घमण्डको पराकाष्ठा भयो। त्यो राम्रो होइन। त्यस विषयमा सबै नेपाली जनताले एकएक हिसाबकिताब गरेका छन्।’
पार्टी विभाजनको नायक केपी ओली आफैं भएको प्रचण्डको आरोप थियो। ‘पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक लगत्तै पशुपति प्लाजामा गुटको भेला गर्नुभयो। मेरा विरुद्ध के-के षडयन्त्र गर्नुभयो। त्यो सबै थाहा छ’, प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हुँदै नभएको कुरा गरेर उल्टै मलाई नै फुटको आरोप लगाउनुहुन्छ। तपाईं नै हो, फुटको नायक। तपाईंले नै हो पार्टी विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको। एमाले नाममा पार्टी दर्ता कसले गयो? मदन भण्डारी फाउण्डेसनको नाममा कसले गुटको भेला गर्‍यो?’
पार्टीमा गुटबन्दी विभाजनको रेखा ओली नै कोरेकाले समस्या पैदा गरेको प्रचण्डले बताएका थिए। सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लम्मै डुब्दा समेत प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैं लाग्नु ठीक नभएको प्रचण्डले बताएका थिए।
यस्तै बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले दुवै अध्यक्षले ल्याएका प्रतिवेदन पार्टीको सम्पत्ति भएको बताएको सचिवालयकै अर्का सदस्यले बताए। ‘आफूलाई लागेका विषयमा दुबै अध्यक्षले स्पष्ट रुपमा पार्टी कमिटीमा प्रतिवेदन ल्याउनुभएको छ। ती सबै पार्टीको सम्पत्ति भएका छन्। त्यस विषयमा गम्भीर छलफल बहस हुनुपर्छ। त्यसबाट एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ’, खनालको भनाई उद्धृत गर्दै ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘कसैले भन्दैमा प्रचण्ड कमरेड वा केपी कमरेड कसैको प्रतिवेदन फिर्ता हुँदैन। ती विषयमा एक-एकगरी छलफल र बहस हुनुपर्छ। त्यहीँबाट वाद, विवाद र प्रतिवाद हुँदै रुपान्तरणमा जानुपर्छ। त्यहीँबाट पार्टी बन्ने प्रक्रियामा जान्छ र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षमा सरकारमा देखिएका जे जस्ता समस्या छन् ती विषयलाई प्रतिवेदनमा ल्याएको भन्दै खनालले प्रचण्डको प्रतिरक्षा गरेका थिए। ‘पार्टीमा अन्तरसंघर्ष हुन्छ। दुई लाइन संघर्ष हुन्छ। कतिपय अवस्थामा तिक्ततापूर्ण अवस्था पनि हुन सक्छ’, खनालको भनाइ थियो, ‘त्यस्तो अवस्थामा ठीक बेठीक दुवै खालका कुरा आउँछन्। त्यो बेला ठीक कुरालाई अंगाल्ने र बेठीक कुरालाई पन्छाउँदै जानुपर्छ।’
सरकार जनताको कामभन्दा दलाल र बिचौलियाको सेवामा लिप्त भएको भन्दै खनालले चर्को आलोचना गरे।
यस्तै बैठकमा बोल्दै अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई म नै राज्य हुँ भन्ने घमण्ड छोड्न आग्रह गरे। आफैं गल्ती गर्दै जाने र त्यसमा केही पनि गरेको छैन भन्दै चोखो बन्ने प्रयास नगर्न नेपालले चेतावनी दिए।
‘पार्टी कमिटीमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्रीले एक-एकगरी जवाफ दिनुपर्छ। हामीलाई मात्रै दिएर हुँदैन, जनता पनि कन्भिन्स हुनुपर्छ’, नेता नेपालको भनाइ थियो, ‘प्रतिवेदनमा उठेका विषयमा बहस छलफल हुनुपर्छ त्यहीँबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।’
यस्तै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारका विषयमा जे जस्ता आलोचना भएका छन्, त्यस्ता विषय पार्टी कमिटीमा प्रतिवेदनका रुपमा आउनु सकारात्मक भएको बताए। दुवै प्रतिवेदनमा उठेका विषयमा बहस छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने गौतमको भनाइ थियो।
बैठकमा ओली‚ प्रचण्ड‚ खनाल‚ नेपाल र गौतममात्रै बोलेका थिए।